Windows 10 သို့အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုရယူနိုင်ပါသလား။
Windows 10 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်လို့ရပါသလား။
10 / 10 / 2020 ဖတ်ပြီးသားမိ 1
Windows 10 သည် PC နှင့် Laptop အစုစုအတွက် Microsoft မှနောက်ဆုံးထုတ် OS ဖြစ်ပြီးအစီရင်ခံစာများကိုယုံကြည်ရန်အတွက်၎င်းသည် OS မိသားစုအတွက်နောက်ဆုံးအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကုမ္ပဏီသည်ဖြန့်ချိသည့် အချိန်မှစ၍ လူအများအား OS အသစ်သို့ပြောင်းရန်အားပေးခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာ / လက်တော့တွင် ၀ င်းဒိုး၏တရားဝင်မိတ္တူကူးထားပါကသူတို့သည်အဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုအခမဲ့ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြသည်။
သို့သော်ဤနေရာတွင်မေးခွန်း -“ Windows PC အားလုံးသည် Windows 10 သို့အဆင့်မြှင့်နိုင်ပါသလား?” ဖြစ်ပါသည်။
နံပါတ် ၁ - သင်၏ OS ဗားရှင်းပေါ် မူတည်၍
ဟာ့ဒ်ဝဲပေါ်မူတည်။ နံပါတ် 2.
ယခုတွင်သင်သည် Windows XP ထက်အသက်ကြီးသော OS တစ်ခုကိုအသုံးပြုနေပါကသင်ကိုယ်တိုင် Windows PC အသစ်တစ်ခုကိုဝယ်ယူသင့်သည်။ သင်၏ PC သည်နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်များနှင့်နီးကပ်စွာနေနိုင်တော့မည့်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။
သင့်တွင် Windows XP သို့မဟုတ် Vista သုံးသောကွန်ပျူတာရှိပါက ISO ဖိုင်ကို Microsoft ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ download လုပ်၍ boot media (USB သို့မဟုတ် CD) ကို သုံး၍ OS ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။
သင့်တွင် ၀ င်းဒိုး ၇ (သို့) ၈.၁ ကိုသုံးသောကွန်ပျူတာရှိပါက Microsoft မှတစ်ဆင့်ဖြန့်ချိနေသော OTA (air over over) update မှတဆင့်အဆင့်မြှင့်နိုင်သည်။ နောက်တစ်နည်းအနေဖြင့်သင်သည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ISO file ကို download လုပ်၍ boot media တစ်ခုနှင့် Windows7OS ကိုထိုနည်းအတိုင်းတပ်ဆင်နိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါး၏အစောပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံးသတ်မှတ်ချက်များနှင့်၎င်းအားမှန်ကန်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ Windows 10 ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်သင်၏ကွန်ပျူတာတွင်လိုအပ်သောအနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များကို Microsoft ကအမှန်တကယ်သတ်မှတ်ထားသည်။
processor ​​ကို - 1 gigahertz (GHz အမြန်နှုန်း) သို့မဟုတ် Chip ပေါ်တွင်ပိုမိုမြန်ဆန်သော Processor သို့မဟုတ် System ဖြစ်သည် (SoC)
ရမ် - 1-bit အတွက် 32 gigabyte (GB) သို့မဟုတ် 2-bit အတွက် 64 GB ရှိသည်
Hard Drive Space ကို - 16-bit OS အတွက် 32 GB 32-bit OS အတွက် 64 GB
ဂရပ်ဖစ်ကဒ် - WDDM9driver နှင့်အတူ DirectX 1.0 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်ကျမည်
display ဆုံးဖြတ်ချက် - ၂၄ x ၇
ဘတ် အရင်တုန်းက တည်နေရာကို ဘယ်လိုမြင်ချင်လဲ။ Google Earth က မင်းကို လွှမ်းခြုံထားပြီးပြီ!!
သင့်ကွန်ပျူတာတွင်ဤအချက်များရှိပါကသင်သည် Windows 10 ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်သတိရပါ၊ OS အသစ်၏ဖြစ်နိုင်ချေအနိမ့်ဆုံးအားနိမ့်ကျသောအဆင့်တွင်ဖယ်ထုတ်။ မရပါ။
ထို့ကြောင့်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းမှာအနည်းဆုံးသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူ PC ကိုမွမ်းမံခြင်းထက် Windows 10 PC / Laptop အသစ်တစ်ခုကို ၀ ယ်ပါက။
သို့သော် အကယ်၍ ကိရိယာအသစ်တစ်ခုသည်သင်၏အစီအစဉ်များတွင်မရှိပါကသင်သည် Windows ၏တရားဝင်မိတ္တူကို အသုံးပြု၍ အနည်းဆုံးသတ်မှတ်ချက်များအနည်းဆုံးရှိသည့်သင့်ကွန်ပျူတာရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး Windows 10 သို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုသင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Windows ကို 10Windows 10 ကို update
လွန်ခဲ့သော Grammarly ကို Chrome ဘရောက်ဇာထည့်သွင်းနည်း
နောက်တစ်ခု Facebook သည်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအရင်းအမြစ်ဌာနအသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်